Nabaddoon lagu dilay Muqdisho & faah faahin laga helayo | dayniiile.com
Home WARKII Nabaddoon lagu dilay Muqdisho & faah faahin laga helayo
Alle ha u Naxariistee waxaa Isbitaalka Erdogan ee (Ex Digfeer) ee Magaalada Muqdisho ugu geeriyooday dhaawac ay Kooxo hubeysan u geysteen Nabadoon Yuusuf Daahir Khayre (Yuusuf Dhoore) oo kamid ahaa Nabaddoonada Soomaaliyeed.
Kooxo ku hubeysnaa bustoolado ayaa la sheegay inay Nabaddoonka dhowr Xabadood ku dhufteen xilli uu ku sugnaa Xaafada NBC ee degmada Hodan, iyaga oo intaasi kadib Goobta ka baxsaday.
Ciidamo katirsan Booliska Soomaaliya tegay goobta uu falku ka dhacay iyaga oo sameeyay howlgallo balse aysan jirin cid ay usoo qabteen weerarkaas.
lama oga ujeedka ka dambeeysa sababta loo dilay Nabaddoon Yuusuf Dhoore oo ka mid ahaa waxgaradka Soomaaliyeed ee muddada dheer ka shaqeynayay nabadeynta iyo dib-u-heshiisiinta beelaha, balse warar soo baxay ayaa sheegaya in uu ka mid ahaa Odayaasha Dhaqanka ee soo xulay Ergada dhawaan soo dooratay Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Inta badan Magaalada Muqdisho iyo Gobolada dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu dilaa Odayaasha Dhaqanka iyo Ergada soo dooraneysa Xildhibaanada Golaha Shacabka, waxaana dilalkaas mas’uuliyadooda sheegta Ururka Al-Shabaab.
Previous articleWar bixin Cajiib ah uu ka diyaariyey Doorashada Gudoomiyahii Hore ee Doorashada Ciro
Next articleJubbaland oo Maanta wafdi qiimeyn ah u direysa Ceelwaaq
Ukraine shells its own population, according to Russia; some
In ka badan 30 carruur ah oo nafaqa darro ugu geeriyootay...